Dadaalada Beesha Caalamka ee la isugu soo dhaweynayo dhinacyada siyaasadda | Dhacdo
Home Wararka Maanta Dadaalada Beesha Caalamka ee la isugu soo dhaweynayo dhinacyada siyaasadda
Dadaalada Beesha Caalamka ee la isugu soo dhaweynayo dhinacyada siyaasadda
Amb. James Swan oo dhurnimadii Khamiista muuqaalka foggaan aragga ee Internetka kula kulmay Madaxweynaha Puntland, Siciid Cabdullaahi Deni ayaa ka dhaadhiciyay in uu ka soo qaybgalo shirka lagu wado in dhinacyadu kaga qaybgalaan Muqdisho, waa haddii aanu qorshuhu waxba iska bedelin.
James Swan oo 14-kii bishan u socdaalay Magaalada Baydhabo ayaa kula kulmay Madaxweynaha Koonfur Galbeed, Cabdicasiis Xasan Maxamed (Lafta-gareen), kaa oo ay isu waafaqeen in shirka Muqdisho uu ka soo qaybgalo. Lafta-gareen ayaana gelinkii dambe ee shalay ka soo degay Garoonka Aadan Cadde.
Previous articleTigray: Dad isku qoys oo lagu khasbay inay isu galmoodaan
Next articleMareykanka oo digniin ka soo saaray doorashooyinka dalka